ရကေစားနစေဥျ ရုတျတရကျ သနျးနဲ့ခြီပွီးတနျဖိုးရှိတဲ့ ရှားပါးရှငေါးခူးကို ဖမျးမိခဲ့တဲ့ အမြိုးသား
ဗီယကျနမျနိုငျငံ Ha Tinh ပွညျနယျက လူမြားဟာ အရှယျအစားကွီးမားတဲ့ ရှားပါးရှငေါးခူလို့ ယူဆရတဲ့ ငါးခူတဈကောငျကို ဖမျးမိကွောငျးတငျပွလာခဲ့ပါတယျ ။ ငါးခူဟာ အလေးခြိနျ 3.5 ကီလိုဂရမျရှိပွီး အရှညျ 80 စငျတီမီတာခနျ့ရှိကာ ငါးရဲ့ အသားအရကေ ခြောမှနေ့ပွေီး ထူးခွားခကျြကတော့ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးမှာ အဝါဖြော့ရောငျရှိပါတယျ ။ ငါးက အရမျးလှတော့ မစ်စတာ A ဆိုတဲ့ အမြိုးသားက အိမျပွနျပွီး ရဇေလုံထဲမှာ မှေးမွူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာပါ ။
အဲ့ဒါနဲ့ပတျဝနျးကငျြကလူတှဟော မစ်စတာ A ထူးဆနျးတဲ့ငါး ဖမျးမိတဲ့အကွောငျးကိုသိပွီး လူအမြားက ဝိုငျးအုံကာလာကွညျ့နခေဲ့ပါတယျ ။ ငါးခူက မြားသောအားဖွငျ့ အနကျရောငျဖွဈပွီး ဗီယကျနမျမှာ အခြို့သော အဖွူရောငျ သို့မဟုတျ အဝါရောငျက မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဥပဒနေဲ့ စာဖတျသူမြားမှ ပွောကွားကွပါတယျ ။ ဒါပမေဲ့ အဲ့လိုအရောငျမြိုးက အရအေတှကျ အလှနျရှားပါးပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ ရှငေါးခူမှာ သူ့ရဲ့တနျဖိုးစြေးနှုနျးက သနျးနဲ့ခြီအထိ ရှိပါတယျ ။
လောလောဆယျမှာ မစ်စတာ A. ဖမျးမိတဲ့ငါးက ရှားပါးမြိုးပွောငျးငါးဟုတျမဟုတျ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မသိရသေးသျောလညျး ၎င်းငျးမှာ တဈသနျးရှိတဲ့ ရှငေါးခူဖွဈလြှငျ ရောငျးဈေးမှာ VND သနျးနဲ့ခြီပွီး ရရှိနိုငျပါတယျ ။ ရှငေါးခူက အလှနျရှားပါးတာကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့ကို ဖမျးမိခွငျးဟာ “ကောငျးကငျမှ တဈစုံတဈရာကို ဖမျးခွငျး” နဲ့ပငျ တူပါတယျ ။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Ha Tinh ပြည်နယ်က လူများဟာ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ ရှားပါးရွှေငါးခူလို့ ယူဆရတဲ့ ငါးခူတစ်ကောင်ကို ဖမ်းမိကြောင်းတင်ပြလာခဲ့ပါတယ် ။ ငါးခူဟာ အလေးချိန် 3.5 ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး အရှည် 80 စင်တီမီတာခန့်ရှိကာ ငါးရဲ့ အသားအရေက ချောမွေ့နေပြီး ထူးခြားချက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ အဝါဖျော့ရောင်ရှိပါတယ် ။ ငါးက အရမ်းလှတော့ မစ္စတာ A ဆိုတဲ့ အမျိုးသားက အိမ်ပြန်ပြီး ရေဇလုံထဲမှာ မွေးမြူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ ။
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဟာ မစ္စတာ A ထူးဆန်းတဲ့ငါး ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီး လူအများက ဝိုင်းအုံကာလာကြည့်နေခဲ့ပါတယ် ။ ငါးခူက များသောအားဖြင့် အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ်မှာ အချို့သော အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင်က မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဥပဒေနဲ့ စာဖတ်သူများမှ ပြောကြားကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုအရောင်မျိုးက အရေအတွက် အလွန်ရှားပါးပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ရွှေငါးခူမှာ သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဈေးနှုန်းက သန်းနဲ့ချီအထိ ရှိပါတယ် ။
လောလောဆယ်မှာ မစ္စတာ A. ဖမ်းမိတဲ့ငါးက ရှားပါးမျိုးပြောင်းငါးဟုတ်မဟုတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးသော်လည်း ၎င်းမှာ တစ်သန်းရှိတဲ့ ရွှေငါးခူဖြစ်လျှင် ရောင်းဈေးမှာ VND သန်းနဲ့ချီပြီး ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ ရွှေငါးခူက အလွန်ရှားပါးတာကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖမ်းမိခြင်းဟာ “ကောင်းကင်မှ တစ်စုံတစ်ရာကို ဖမ်းခြင်း” နဲ့ပင် တူပါတယ် ။
Previous Article အီးယူ နိုငျငံမြား၏ ဒေါသမုနျတိုငျးကို ကွောကျနရေပွီဖွဈတဲ့ ဟှနျဆနျ
Next Article မင်ျဂလာဆောငျပွီး2ပတျအကွာမှ ဇနီးသညျက ယောင်ျကြားဖွဈနမှေနျး သိခဲ့ရတဲ့အမြိုးသား